Rဇာနည္ကို အနား ထားၿပီး အဆို ရွင္ တျခားသူ လို႔ ေျပာေနၾကတဲ့ အေပၚ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္ဆိုတဲ့ ၾကည္ျဖဴသွ်င္ – Shwe Ba
Rဇာနည္ကို အနား ထားၿပီး အဆို ရွင္ တျခားသူ လို႔ ေျပာေနၾကတဲ့ အေပၚ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္ဆိုတဲ့ ၾကည္ျဖဴသွ်င္
ၿပိဳင္ပြဲဝင္တစ္ဦး သီဆိုတဲ့ “ညႇိဳ႕ေသာ ပင္လယ္ ၊ ဆြဲငင္ေသာ လမင္း” သီခ်င္းရဲ႕ မူရင္းအဆိုေတာ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မွားယြင္းေျပာမႈေလးေတြေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြၾကား ဂယက္ထခဲ့ၿပီး ဒီေန႔ စက္တင္ဘာလ (၇)ရက္ေန႔မွာေတာ့ ၾကည္ျဖဴသွ်င္က သူမရဲ႕ ႐ိုက္ကူးခဲ့တဲ့ “ညႇိဳ႕ေသာ ပင္လယ္၊ ဆြဲငင္ေသာ လမင္း” ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ ဝင္ေတးျဖစ္ကာ မူရင္းအဆိုေတာ္ Rဇာနည္ ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းေလးကို “”ညႇိဳ႕ေသာပင္လယ္ ၊ ဆြဲငင္ေသာလမင္း” ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ဝင္သီခ်င္းသီဆိုသူ မူရင္း အဆိုရွင္ က” R ဇာနည္ “ပါ။ ကြၽန္မတို႔မိသားစုပိုင္ မဟာထြန္း႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရး၊ ဝတၱဳ လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္) ဒါ႐ိုက္တာ က ကြၽန္မ ၾကည္ျဖဴသွ်င္ ႐ိုက္ ကူးတဲ့ ” ညႇိဳ႕ေသာပင္လယ္ ၊ ဆြဲငင္ေသာလမင္း” ႐ုပ္ရွင္ အတြက္ အသစ္ေရးတဲ့သီခ်င္းပါ။ မင္းသား – ေဒြး ၊ မင္းသမီး – ထြန္းအိျႏၵာဗို ပါ.။ ၿပီးေတာ့ ” လမင္းသို႔” အမည္နဲ႔ ” Rဇာနည္ ၊ မီးမီးခဲ ” စုံတြဲသီခ်င္းေခြထုတ္ခဲ့ပါေသးတယ္။
ထုတ္လုပ္သူက ကြၽန္မ ညီမ မႏုေ႐ႊရည္ပါ။ ဒီသီခ်င္းကို ဇာတ္ဝင္သီခ်င္းအျဖစ္…. ေတးေရး-ေစာခူဆဲ က ေရးၿပီး ၊ “Rဇာနည္ နဲ႔ မီးမီးခဲ” စုံတြဲဆိုခဲ့တာပါ။ မူရင္းအဆိုရွင္ ” Rဇာနည္ ” ကိုအနားထားၿပီး ခုလိုေတြေျပာေနၾကတာ ျမင္ေတာ့ ၊စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိလို႔ပါ။ ၾကည္ျဖဴသွ်င္ (၇ – ၉ – ၂၀၂၀)” ဆိုၿပီး သူမရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ တင္လာ ခဲ့ပါတယ္.။ ၾကည္ျဖဴသွ်င္ကေတာ့ မူရင္းအဆိုေတာ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မွားယြင္းမွတ္မိေနၾကတဲ့အျဖစ္ကို စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိလို႔ ဖြင့္ခ်လာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္..ပရိသတ္ႀကီး.။ ဖတ္ရႈ႕ေပးခဲ့ၾကတဲ့ ပရိသတ္ႀကီးလည္း ေပ်ာ္႐ႊင္သာယာတဲ့ ေန႔ေလးတ စ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာ င္းေပးလိုက္ပါယ္.။
ပရိသတ်ကြီးရေ လတ်တလောမှာ လူစိတ်ဝင်းစားမှု မြှင့်တက်နေတဲ့ The Voice Myanmar သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကိုတော့ အထူးအထွေမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုအောင် ကြည့်ရှု့နေကြမယ် ထင်ပါတယ်.။ ပျော်ရွှင်မှုတွေ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို ပေးပြီး တစ်ပတ်နဲ့တစ်ပတ်မှာ မထူတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ ဂီတပါရမီအရည်အချင်းပေါင်းစုံကို မြင်နေရတဲ့ ပြိုင်ပွဲဖြစ်ကာ ဂီတလောကရဲ့ နာမည်ကြီး အဆိုတော်တွေဖြစ်တဲ့ Rဇာနည်၊ နီနီခင်ဇော်၊ ရန်ရန်ချမ်းနဲ့ ကျားပေါက်တို့က ဒိုင်လူကြီးတွေအဖြစ်နဲ့ ပါဝင်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။ ပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့ အပတ်တိုင်းမှာ အံ့သြဖွယ်လေးတွေ ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ The Voice Myanmar သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကတော့ ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ ပွဲစဉ်ညမှာ ဒိုင်လူကြီးတွေကြားမှာ မှားယွင်းတဲ့ လွဲမှားမှုတစ်ခုကြောင့် အနုပညာရှင်တွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကြားမှာ ဂယက်လေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.။
ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ဦး သီဆိုတဲ့ “ညှို့သော ပင်လယ် ၊ ဆွဲငင်သော လမင်း” သီချင်းရဲ့ မူရင်းအဆိုတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မှားယွင်းပြောမှုလေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေကြား ဂယက်ထခဲ့ပြီး ဒီနေ့ စက်တင်ဘာလ (၇)ရက်နေ့မှာတော့ ကြည်ဖြူသျှင်က သူမရဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ “ညှို့သော ပင်လယ်၊ ဆွဲငင်သော လမင်း” ရုပ်ရှင်ဇာတ် ဝင်တေးဖြစ်ကာ မူရင်းအဆိုတော် Rဇာနည် ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းလေးကို “”ညှို့သောပင်လယ် ၊ ဆွဲငင်သောလမင်း” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်သီချင်းသီဆိုသူ မူရင်း အဆိုရှင် က” R ဇာနည် “ပါ။ ကျွန်မတို့မိသားစုပိုင် မဟာထွန်းရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး၊ ဝတ္တု လွန်းထားထား(ဆေးတက္ကသိုလ်) ဒါရိုက်တာ က ကျွန်မ ကြည်ဖြူသျှင် ရိုက် ကူးတဲ့ ” ညှို့သောပင်လယ် ၊ ဆွဲငင်သောလမင်း” ရုပ်ရှင် အတွက် အသစ်ရေးတဲ့သီချင်းပါ။ မင်းသား – ဒွေး ၊ မင်းသမီး – ထွန်းအိန္ဒြာဗို ပါ.။ ပြီးတော့ ” လမင်းသို့” အမည်နဲ့ ” Rဇာနည် ၊ မီးမီးခဲ ” စုံတွဲသီချင်းခွေထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ထုတ်လုပ်သူက ကျွန်မ ညီမ မနုရွှေရည်ပါ။ ဒီသီချင်းကို ဇာတ်ဝင်သီချင်းအဖြစ်…. တေးရေး-စောခူဆဲ က ရေးပြီး ၊ “Rဇာနည် နဲ့ မီးမီးခဲ” စုံတွဲဆိုခဲ့တာပါ။ မူရင်းအဆိုရှင် ” Rဇာနည် ” ကိုအနားထားပြီး ခုလိုတွေပြောနေကြတာ မြင်တော့ ၊စိတ်မကောင်းဖြစ်မိလို့ပါ။ ကြည်ဖြူသျှင် (၇ – ၉ – ၂၀၂၀)” ဆိုပြီး သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာ ခဲ့ပါတယ်.။ ကြည်ဖြူသျှင်ကတော့ မူရင်းအဆိုတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မှားယွင်းမှတ်မိနေကြတဲ့အဖြစ်ကို စိတ်မကောင်းဖြစ်မိလို့ ဖွင့်ချလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်..ပရိသတ်ကြီး.။ ဖတ်ရှု့ပေးခဲ့ကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ နေ့လေးတ စ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတော င်းပေးလိုက်ပါယ်.။
ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ထဲကေန အားသာခ်က္ကို ရယူကာ နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္္ပင္္ခံ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ရယူသြားတယ္ ဆိုသည့္ စကားရပ္အား ဒီခ်ဳပ္အမတ္ ဦးေနမ်ိဳးထြန္းက ကန္႔ကြက္